Basikety – Mada N1A Misongadina ny Ascut sy ny GNBC | NewsMada
Basikety – Mada N1A Misongadina ny Ascut sy ny GNBC
Nanomboka tamin’ny fomba ofisialy, ny asabotsy lasa teo, ny fifaninanam-pirenena, ho an’ny sokajy N1A, lahy sy vavy, taranja basikety. Hatreto aloha, voahaja ny lojika. Misongadina hatrany ireo ekipa efa fanta-daza.
Tsara fanombohana ny GNBC Vakinankaratra sy ny Ascut Atsinanana, eo amin’ny lehilahy, mandritra ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, sokajy N1A, taranja basikety. Fihaonana, tanterahina etsy amin’ny kianja ivelan’i Mahamasina. Samy nahazo fandresena roa avy mantsy izy ireo, nandritra ny andro roa voalohany amin’ny fifanintsanana.
Ny zandarin’i Vakinankaratra, izay nanilika nisesy ny Challenger Analamanga, tamin’ny isa 80 no ho 55 sy ny Sebam Boeny, tamin’ny isa 76 no ho 65. Tetsy ankilany, lavon’ny Ascut, tamin’ny isa, 78 no ho 72, teo amin’ny lalao voalohany ny Cospn Analamanga ary mbola nanamontsana ny 2BC Vakinankaratra, tamin’ny isa 72 no ho 37, teo amin’ny lalao faharoa. Mbola misongadina ny traikefa sy ny fahaiza-manaon’ireo mpilalao ao aminy, izay tombony ho azy ireo.
Mbola misongadina ihany koa ny Cosfa sy ny TMBB izay samy avy amin’ny ligin’Analamanga. Efa nandrombaka fandresena roa avy ihany koa izy ireo, amin’ity fifaninanam-pirenena ity. Efa somary ratsy toerana kosa ny Cospn, izay efa tojo faharesena fanindroany sahady.
Eo amin’ny vehivavy, mbola manjaka aloha hatreto ny Fandrefiala sy ny MB2 All Analamanga. Samy nomontsanin’ny Fandrefiala, tamin’ny isa mavesatra avokoa mantsy ny ASA Analamanga sy ny CRJS Atsinanana. Tsy miady mihitsy ny lalao satria toy ny nanaovan’ny Fandrefiala, fanazarantena fotsiny ireo mpifanandrina aminy. Hitohy, anio ny fifanintsanana, amin’ity fifaninanam-pirenena N1A ity.